Abangane bethu nabalingani bethu - Isifundo seBhayibheli somKristu omuSha/ or New Christian Bible Study
Abangane bethu nabalingani bethu
Abangane bethu abako -e Bryn Athyn College bahlinzeke umbhalo owumsebenzi ka Swedenborg wesiLatini neminingi ehunyushwe ngesiNgisi, kusukela kumsebenzi ka-STAIRS. Isikhwama sasekolishi se Capenter Fund sesisekele ukuhlanzwa nokuxhumanisa imisebenzi kaSwedenborg yesiLatini, ukungenisa kwezinguqulo zeBhayibheli zesiHebheru nesiGreki, nokuningi. I-Swedenborg Library (UMtapo wezincwadi) isisize ukuskena nokwenza futhi i-OCR nezinye izinguqulo ezisuka kumlando wayo.
I-yeGeneral Church of the New Jerusalem inikeze imvume yokusebenzisa eziningi izinguqulweni zayo zemisebenzi kaSwedenborg, futhi i-General Church yaseCanada, inikeze ukusekela ukungenisa izinguqulo ngesiFulentshi, iSpanishi nakwezinye izilimi, nasekuthuthukiseni ismartphone app.
I-Lord’s New Church inikeze ukweseka kwezezimali, ulwazi lomqondisi we-New Church directory, ukusekela ukuhumusha, nezimvume zokusebenzisa izinguqulo zabo ezikhona emisebenzini ka-Swedenborg.
I-General Conference of the New Church, esekelwe e-UK, inikeze ukweseka kwezezimali kule phrojekthi, namalungelo okusebenzisa izintshumayelo ngabasebenzi bayo. I Scottish Association of the New Church ijoyine i-General Conference kulolu xhaso.
I-New Church Australasia inikeze ukweseka kwezezimali kule phrojekthi, kanye namalungelo okusebenzisa izintshumayelo ngabafundisi bayo, nezinye izinsiza.
I-General Convention of the New Jerusalem, ngokusebenzisa i-Iungerich Fund yayo, yesekele ukungenisa kwamakhulu ezintshumayelo, kanye nokuhunyushwa kwe-New Century Edition ye-Arcana Coelestia. Futhi, i- Bayside Swedenborgian Church inikeze izimvume zokusebenzisa izinsiza eziningi ezivela ezinqolobaneni zayo eziku-intanethi.
AbakwaSwedenborg Publishers International baye bahlinzeka ngokusekelwa ngokwezimali ukuze bangenise ukuhunyushwa kwemisebenzi Swedenborg ngezilimi eziningi.
I-Swedenborg Foundation inikeze izimvume zokusebenzisa i-New Century Edition neminye imisebenzi kaSwedenborg ehunyushiwe, ukuhlolisisa nangokubungane yabheka nakwisilathini nakweminye imibuzo enika umndlanda
I-Kempton Project inikeze idatha(ulwazi) olu/ ewusizo nge ekubhekisweni kwezinkomba zemibhalo kaSwedenborg, futhi izixhumanisi ezihlokweni zezinguqulo zesiLatini, nemininingwane eminingi ewusizo.
I-Swedenborg Society inikezele ngemvume ukuba kusethsenziswe imisebenzi yayo ka Swedenborg ehunyushiwe.
I-Center yeSwedenborgian Studies eBerkeley, California, inikeze izintshumayelo ezivela ezinqolobaneni zayo ukuze zichaze izindaba zeBhayibheli.
I-New Christian Bible Study Project yasungulwa ngaphansi kwe- Pittsburgh Society ye-New Church.
Ezinye izinsizakufundisa zinikelwe yiNew Church Educators zivdla ku-General Church Education.
UWalter Weiss, ongomunye wabathuthukise loluhlelo lokusesha nge grand man (GrandMan Search), wahlinzeka ngemininingwane eyinhloko ekubhekisweni kwezintambo kanye nemibhalo elitshwe phansi eyayiqoqwe nguye kanye no Jan Weiss ongasekho.
Ukuthuthukiswa kwewebhusayithi yesayithi kwenziwe ngu- SkyMark Corporation.